COVID-19 Update June 09/2020 - NuuralHudaa
COVID-19 Update June 09/2020
Ministeerri Fayyaa Sa’aa 24 dabre keessa qoronnoo geggeefameen namoota 190 irratti vaayirasiin koroonaa argamuu beeksise
Ministeerri Fayyaa ibsa Kiibxata har’aa baaseen, qorannoo laabiraatoorii sa’aatii 24 darban keessatti namoota 4,599 irratti geggeeffameen, namoota 190 irratti vaayirasiin Koroonaa argamuu beeksise.
Namoonni vaayirasichi irratti argame dhiira 135 fi dubartoota 55 yoo ta’an, hundinuu lammiilee Ityoophiyaa tahuu ibsame.
Namoota kanneen jidduu 153 jiraattota magaalaa Finfinnee, 2 naannoo Tigiraay, 10 naannoo Amaaraa, 3 naannoo Somaalee, 3 naannoo Hararii, 16 jiraattota naannoo Oromiyaa yoo tahan, 3 ammoo jiraattota naannooKibbaa tahuu ibsi ministeerichaa ni addeessa.
Haaluma kanaan Ityoophiyaa keessatti baay’inni namoota Vaayirasii Koronaatiin qabamanii 2,336 kan gahe yoo ta’u, namoonni 379 ammoo dhibee kanarraa fayyuu ibsame.
Dabalataanis ministeerri Fayyaa ibsa har’a baase kanaan, sababa vaayirasii koraanaatiin kaleessa namoonni 5 du’uu ibse. Haaluma kanaan biyyattii keessatti lakkoofsi namoota sababa vaayirasichaatiin du’anii 32 gahee jira.
Ministeerichi ibsa kaleessa baaseen lakkoofsi namoota vaayirasichi irratti argamee 136 jedhamee kan gabaafame dogongora tahuu ibsuun, namoonni 10 kanneen kanaan dura vaayirasichi irratti argamee hordoffiin godhamaafii ture akka taheefi lakkoofsi namoota vaayirasichi irratti argamee 126 jechuun sirreeffamaa baase.
Gabaasa COVID-19 iddoo kan qabame jedhu San Osoo bifa Keelloodhaan ta’ee gaariidha.
September 27, 2021 sa;aa 9:23 pm Update tahe